Unofanirwa here Kugadzira Yako Yakagovaniswa Midhiya? | Martech Zone
Chipiri, July 22, 2014 Chipiri, July 22, 2014 Douglas Karr
Isu tinoshanda nemakambani mazhinji emakambani ekushambadzira kuvandudza zvakadzama zvemukati uye nekutsvaga kweiyo infographics, whitepapers, mavhidhiyo uye avo ezvekushambadzira marongero azere. Kune chikamu chikuru, isu tinogara tichiedza kushandisa simba rechiratidzo chavo. Izvo zvakakosha kuti uve nezwi uye zvinoonekwa zvine chekuita nekambani kana zvigadzirwa zvaro kana masevhisi mune izvo zvavanogovera.
Taura zviri nyore, brand yako ndizvo zvaunotarisira kufunga paanonzwa zita rako rechiratidzo. Izvo zvese zvinofungirwa neruzhinji kuti zvinoziva nezve rako zita rekupa zita-zvese zviri zviviri (semuenzaniso Zvinouya mu robin-zai-rebhuruu bhokisi), uye zvemanzwiro (semuenzaniso Zvinodanana). Zita rako rechiratidzo riripo zviripo; vanhu vanogona kuzviona. Yakagadziriswa. Asi chako chiratidzo chiripo chete mundangariro dzemumwe munhu. Jerry McLaughlin, Chii chinonzi Brand, zvakadaro?
Dzimwe nguva, isu tinobuda kunze kwekumaka midhiya yavo yakaparadzirwa. Kazhinji ndipo patinovandudza infographics. Vanogovera nhepfenyuro senge machena mapepa uye infographics vane mukana wakakura zvakanyanya wekugovaniswa pamasaiti. Kana zvikaonekwa sekushambadzira kukuru, zvakadaro, zvinokuvadza mikana yekuwana izvo zvemukati zvakagovaniswa. Iwe unofanirwa kuona kuti yakasimba sei kuisa zvinyorwa zvako zvakagoverwa uye kuti zvinokuvadza here kugona kwayo kugoverwa.
Semuenzaniso, isu takashanda pane akateedzana e infographics eAngie's Chinyorwa. Chinyorwa chaAngie chine mhando inoshamisa uye inovimbwa uye yakasimba pawebhu uye kushandisa webhusaiti yavo kwaive kusingaite. Vanhu vanozoda kugovana zvirimo nekuda kwekuti inovimbwa uye inozivikanwa. Tarisa uone a Nhungamiro kuDental Care uye Mwaka neMwaka Wenongedzo kune Landscaping uye Lawn Kuchengeta. Isu takashandisa Angie's Chinyorwa kutsikisa, dhizaini uye logo mune yega yega yeiyo infographics:
Pane dzimwe nguva, isu takashanda nemakambani anga asingazivikanwe uye achishaya chakasimba chiratidzo, saka takatarisa pane nyaya iri kuseri kwechimedu pane yekumaka yekambani kuti tiuye neine infographic yakasimba yaibudirira, yakagovaniswa zvakanyanya, uye kwakatungamira mushandisi kune peji rekumhara uko kwavanogona kutarisa nezvenyaya iyi kwete yekambani. Isu takatoshandisa dingindira reHalloween sezvo infographic yakaiswa nguva kutenderedza Halloween!
Tarisiro yedu mune yekupedzisira yaive yekuita kuti musoro ugovaniswe pasina kunyanyisa kumaka kunogona kuita kuti vaparidzi vepamhepo vazeze kugovana infographic. Uye zvakashanda!
Zvakadaro, pane dzimwe nguva, isu takasundidzira akateedzana infographics ayo akange akasimbwa zvine mutsindo pasiti yemutengi asi kwete zvakanyanya kushambadzira iyo mhando. Taida kuti infographic dzakateedzana dzivake masimba muindasitiri yavo chinyararire kuitira kuti vaparidzi vagovane nhepfenyuro uye vasazive kuti vaive nemazita akasimba… zvaingotaridza sekunge vese vane chimiro chimwe chete. Iine yega infographic, kugovera kwakawedzera. Nehurombo, mutengi (zvisirizvo) akadzorerwa shure kwekutisiya uye ivo vakarasikirwa nesimba rese iro rakanga ravakwa saka ini handisi kuzovaratidza.
Pachirongwa ichi chenguva yakareba, chinangwa chedu ndechekuti kambani iyi ione seye kunobva hunyanzvi mukati meindasitiri yavo. Mune mamwe mazwi - isu tanga tichishandisa infographics ku kuvaka mhando yavo, kwete kutarisa pairi.
Mashandisiro aunoita midhiya yako yakaparadzirwa inogona kukanganisa zvakanyanya kugona kwayo kugoverwa. Kushambadzira kwakasimba kunogona kudzima vaparidzi vepamhepo - zvisinei nesimba reiyo vhidhiyo, infographic kana whitepaper. Isu tinodzikwa zuva nezuva pane infographics muindasitiri yekushambadzira - uye isu tinowanzo ramba iyo mienzaniso iko iko iri hombe kushambadza. Vaparidzi havadi kushambadza zvako, ivo vanoda kushandisa yakakura midhiya iwe yawakagadzira kuvaka kukosha nevateereri vavo. Iva nemaune mukudzika kwekumaka iwe kwaunoshandisa mukugadzira zvemukati.
Tags: muchisovakapiswa infographicskuparadzirwa midhiyaKushambadzira InfographicsKushambadzira Vhidhiyoisiri-brandisiri-yakashambadzirwa infographicsakagovana midhiyavarungu
Recruit'em: Tsvaga Bhizinesi Kubatana paGoogle